AmaProteas azibuyise zishisa kwiPakistan eWanderers - Impempe
AmaProteas azibuyise zishisa kwiPakistan eWanderers
ULizaad Williams wamaProteas
INingizimu Afrika izibuyise zishisa izinduku ngesikhathi eshaya iPakistan ngamawikhethi ayisithupha kwiT20 yesibili eWanderers Stadium, eGoli, ngoMsombuluko.
Iqembu lakuleli aliyiqalanga kahle imidlalo ewuchungechunge emine yeT20 ngesikhathi lishaywa emdlalweni wokuqala eCenturion ngoMgqibelo. Nokho iqembu lakuleli libukeke libhukulile emdlalweni wesibili nokucaciswe ukuthi lithathe amawikhethi amabili ngokushesha njengoba lishwibe kuqala. Ithosi iwinwe yiPakistan yakhetha ukubhetha kuqala kodwa izinto zangayihambela kahle.
Ukuwa kwamawikhethi ngokushesha kuphoqe iPakistan ukuthi ibhethe ngokucophelela nokuyinto engadingeki kwiT20 ngoba ama-over asuke engamile. Umdlali obemise kabi iPakistan uGeorge Linde okunguyena othathe amawikhethi okuqala amathathu. Omunye umdlali odlale kahle uLizaad Williams naye othathe amawikhethi amathathu.
Kulo mdlalo ubengekho uFakhar Zaman okuthiwa ubengaphilile. Lokhu kwenze ukuthi iPakistan ivule ngoMahommad Rizwan ophume ngebhola lokuqala ngqa ekhishwa uLinde. Ngemuva kwalokho akuhambanga kahle neze kwiPakistan njengoba kuwuBabar Azam kuphela odlale into esile ehlanganisa ama-run angu-50 emabholeni angu-50. IPakistan igcine yenze ama-run angu-140 okuyinto engasho lutho uma udlalela eWanderers Stadium.
Iphendula iNingizimu Afrika kuvele kwaba lula kakhulu njengoba iqale kahle futhi ingenayo nencane ingcindezi.
Ukuwina kwamaProteas kusho ukuthi la mazwe asebambene ngo 1-1, kanti sekusele imidlalo emibili yeT20. Umdlalo olandelayo ungoLwesithathu eSuperSpirt Park, eCenturion. Iqembu elizowina lapha lizobe selinesiqiniseko sokuthi ngeke lilahlekelwe uchungechunge lwemidlalo ngoba kuzobe sekusele umdlalo owodwa kuphela ozokuba ngoLwesihlanu khona eCenturion.
Previous Previous post: Isashosholoza iSundowns, ifake uswazi kwiChippa
Next Next post: OweChippa ubona besenethuba lokubalekela izembe